SEO သည်သင်၏ဆိုက်နှင့်ရပ်တန့်မသွားပါ။ | Martech Zone
စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အခြိနျမှနျမှ, DK New Media ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများအားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များသောအချိန်တွင်အခန်းရှိသည်။ ကျနော်တို့အချို့အကြောင်းကို blog, သူတို့ကိုအပေါ်ရှိသည် ရေဒီယိုရှိုးအခြားသူများအတွက်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်အချို့ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးသော်ကျွန်ုပ်တို့သည် software လိုင်စင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာစောင့်ကြည့်မှုအတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလွှတ်လိုက်သည်) နှင့် SEO မြှင့်တင်ရေးအချို့ကိုပင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအားလပ်ရက်များအတွက်, ငါတို့အဘို့ဤလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် အားလုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်များ၏။
ထိုလက်ဆောင်များအနက်တစ်ခုမှာအေးဂျင့်တစ် ဦး အတွက်အခမဲ့မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီ။ အာဒံကကျွန်တော့်လုပ်ငန်းကိုအမြဲတမ်းကူညီနေတယ်၊ ​​ကုဒ်နံပါတ်နဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီတာ၊ ငါတို့ကိုမြှင့်တင်တာ၊ ဒါဟာ payback အချိန်ပဲ! ဒီအထုပ်၏တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်။ $ 1,000 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောဘလော့ဂ်များ၊ bookmarking sites များနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုပစ်မှတ်ထားပြီးအာဒံကိုယ်စားနေရာတိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ Agent Sauce သည်အကောင်းမြင်ပြီးသော့ချက်စာလုံးအချို့တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ မြှင့်တင်ရေးအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အာဒံကိုရလဒ်များကိုမျှဝေဖို့ကြင်နာအလုံအလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလမှစ၍ (ရက် ၆၀ အောက်) Agent Sauce သည် analytics ပရိုမိုးရှင်းပြီးနောက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုယူကြပြီ:
လည်ပတ်မှုနှုန်းမှာ ၄၇% ရှိသည်။
စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှုနှုန်းမှာ ၅၄% ရှိသည်။
တုန်ခါမှုနှုန်း ၁၀.၅% ကျဆင်း
site ပေါ်တွင်အချိန် 37% တက်သည်
လည်ပတ်မှုအသစ် ၇% တက်သည်
ဤစာရင်းများကို စုပေါင်း၍ ကြည့်ပါကနံပါတ်များအားလုံးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရွေ့သွားသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်? သင့်ဆိုဒ်အားမှန်ကန်သောအကြောင်းအရာများအတွက်ပြည်တွင်း၌အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များက၎င်းကိုထိုနည်းအတိုင်းရှုမြင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင့်ဆိုဒ်သို့ပြန်ချိတ်ဆက်မှုများရှိသောပြင်ပရှိအကြောင်းအရာများသည်အတည်ပြုချက်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုညွှန်ပြသောသော့ချက်စာလုံးများကိုတွေ့သောအခါသင်၏အဆင့်ကိုသင်၏အဆင့်သို့တက်စေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများမှာစုစုပေါင်းအသွားအလာအမှန်တကယ်ကျဆင်းသွားသည့်နေရာတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ်မှတ်ထားမှုကြောင့်၊ ပရိသတ်ကိုသာမဟုတ်ဘဲသင့်ဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သောပရိသတ်ကိုရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ အာဒံ၏ကိန်းဂဏန်းများအရလူများသည်ကြာကြာနေခြင်း၊ စွန့်ခွာထွက်ခွာခြင်း၊ လူများစွာသည်လာကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူအများမြင်တွေ့ရမည့်အရာအတိအကျကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဘာမှမလုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးကတည်းက ၂၅% အထိလာရောက်လည်ပတ်သည်
13:2011 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 16 တွင်
Digital Home Info ကတကယ်မြင်ချင်တာကသူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအတွက်ငွေပေးချေမှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တိုးပွားလာတဲ့လည်ပတ်မှုနဲ့စာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်းစတာတွေပဲလို့ကျွန်တော်သံသယရှိမိပါတယ်။ အသွားအလာတွေအားလုံးနဲ့အပြောင်းအလဲတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပြီလဲ။ ဒါတွေအားလုံးကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား။
13:2011 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 08 တွင်
ထူးခြားတဲ့မေးခွန်း - ငါနဲ့ရှင်ပေါလု ၁၀၀% သဘောတူတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာကဲ့သို့အာဒံသည်သူ့ site ပေါ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မရှိသည့်အပြင်၊ အာဒံသည်ဤအချက်များကိုဖော်ပြရန်လုံလောက်သော်လည်းအရောင်းများကိုယခုအချိန်တွင်မသိသေးပါ။ ငါသူရောင်းသည်ကတော့တဆင့်ဒီဆောင်မောင်းအဖြစ်သူကလပေါင်းများစွာပိုမိုလိမ့်မည်ဟုသံသယရှိကြသည်။
15:2011 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 6, 29
ရှင်ပေါလုငါတကယ်လိုချင်တာကပိုကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုပဲဆိုတာသဘောတူလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အွန်လိုင်းမှငွေရှင်းကောင်တာရှိသော်လည်း (စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်သည်။ Doug စိတ်မကောင်းပါ) ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အနည်းငယ်သည်ထိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားကြသည်။ Doug ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ပို့ဆောင်ပေးပြီး၎င်းတို့အားရောင်းချရန်ပြုစုပျိုးထောင်သည်။ ငါနောက်ဆုံးညဥ့်သင့်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုမြင်သောအခါငါမှတဆင့်သွား။ ထုတ်လုပ်ပြီးနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအလားတူကာလ vs. ပြီးစီး၏ရောင်းကြည့်ပါ။ ငါ ~ ၄၀% ပိုထုတ်ပေးတယ်၊ ဒီနှစ်မှာ ၀ ယ်သူ ၂၅% လောက်ထပ်တိုးလာမယ်လို့ငါပြောနိုင်တယ်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ရာသီ၊ ရောင်းအားတိုးတက်ခြင်းသည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေးသဘောသဘာဝဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရင်းများစွာဖြစ်နိုင်သည်။ အဓိကအချက်မှာတရား ၀ င်အသွားအလာများ (မျက်လုံးများမဟုတ်ဘဲ) တိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ရောင်းအားတိုးလာသည်။ သော့ချက်ကတရားဝင်အသွားအလာဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်ခြင်း။